स्थिरता निम्तिने आशंकाका बिच, पश्चिमा देशहरुमा चिनीया त्रास ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय स्थिरता निम्तिने आशंकाका बिच, पश्चिमा देशहरुमा चिनीया त्रास !
स्थिरता निम्तिने आशंकाका बिच, पश्चिमा देशहरुमा चिनीया त्रास !
काठमाडौं । चीनिया गतिविधि बाट त्रसित भैरहेका पश्चिमा रास्ट्रहरुलाई चीनले अझ पेल्न खोजेको देखिन्छ । “चीनले बेइजिङको पक्षमा उभिँदा अनिवार्य रूपमा द्वन्द्व निम्त्याउने छ भन्ने विश्वास गर्ने पश्चिमका केही मानिसहरूमा डरलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छ। ‘हामीले चीनमा स्थिरता कायम राख्न के गर्छौं भन्ने कुरामा चिनियाँहरूले हाम्रो कार्य निर्धारण गर्न वा भिटो प्रयोग गर्न नदिने होसियार हुनुपर्छ। हुभर इन्स्टिच्युटका प्रतिष्ठित रिसर्च फेलो माइकल आर अस्लिनले भने, ‘यसले उनीहरूका लागि शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा परिवर्तन गर्न जारी राख्न थप ठाउँ सिर्जना गर्नेछ’। अमेरिकी विमानवाहक जहाजमा आक्रमण गर्न, तर बदलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त नौसैनिक अपरेशनको दायरा बढाएपछि यसले आक्रोश पैदा गर्छ। एसियामा शक्ति सन्तुलनको चुनौती देखा परेका छन । हाम्रा सहयोगीहरू यस्तो विन्दुमा छन् जहाँ उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा चीनको सैन्य विस्तारको जवाफ दिन अझ धेरै गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर तिनीहरू अझै पनि बेइजिङको प्वाँखहरू हल्लाउने बारे धेरै चिन्तित छन्।
चीनलाई देखाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो कि तान्ता र धम्कीले काम गर्दैन, हाम्रो गठबन्धन र क्षेत्रलाई मुक्त राख्नको लागि क्षमता निर्माण गर्नको लागि हाम्रो प्रयासलाई निरन्तरता दिनु हो – आवश्यक भएमा ताइवानको रक्षामा आउन तत्परता सहित। वृद्धिको जोखिम वास्तविक छ, तर हामी यसलाई पक्षाघात हुन दिन सक्दैनौं। आक्रामकताको अनुहारमा, निष्क्रियता सबैको सबैभन्दा खतरनाक मार्ग हो।”
अक्टोबरको सुरुमा, चिनियाँ सेनाले ताइवान विरुद्ध अहिलेसम्मको सबैभन्दा खतरनाक कदम चाल्यो, त्यहाँ आतंक फैलियो। तर त्यस हप्ता बेइजिङको आक्रोशको वास्तविक लक्ष्य ताइवान होइन, बरु संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य पाँच सहयोगी नौसेनाहरू थिए जसले नजिकैको पानीमा अभूतपूर्व संयुक्त अभ्यास गरिरहेका थिए। बेइजिङले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र हाम्रो संलग्नताका सर्तहरू परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक स्थिति द्रुत रूपमा परिवर्तन हुँदैछ।
बाइडेन प्रशासनले चीनको कार्यको निन्दा गर्‍यो, तिनीहरूलाई “उत्तेजक” र “अस्थिरता” भन्यो र चेतावनी दियो कि यसले “क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्छ।” तर पहिले नै तनावपूर्ण अवस्थालाई बढाउन नचाहेको, बिडेन प्रशासनले बेइजिंग को चालहरू एकै समयमा नजिकैको फिलिपिन्स सागरमा भइरहेको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी नेतृत्वको संयुक्त नौसैनिक अभ्यासको प्रतिक्रिया हो भनेर खुलासा गरेन।
यस क्षणमा, अमेरिका-चीन सैन्य सम्बन्धको सामान्य बिग्रिएको कारण दुई पक्षहरू बीच कुनै सीधा सञ्चार थिएन। त्यसोभए चीन र पश्चिमले एक अर्कासँग जहाजहरू र युद्धक विमानहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए, दुबै पक्षहरूलाई उनीहरूको सन्देशहरू कसरी आउँदैछ भनेर अनिश्चित छोडेर।
“यो स्पष्ट रूपमा सन्देश पठाउने उद्देश्य थियो, र स्पष्ट रूपमा हामीलाई लाग्छ कि समय संयोग थिएन,” एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीहरूले मलाई ताइवान नजिकै चिनियाँ वायुसेना उडानहरूको बारेमा भने। “तिनीहरू पक्कै पनि लचिलो छन्, पश्चिमीलाई बलियो संकेत पठाउन र बाटोबाट टाढा रहन।”
ताइवानले बेइजिङको सन्देश ठूलो र स्पष्ट सुने – र समान स्पष्टताका साथ प्रतिक्रिया दियो। ताइवानी रक्षा बलले चिनियाँ
वायुसेनाको आक्रमणको जवाफ दिन विमानहरू स्क्र्याम्बल गरे। ताइवानका नेताहरूले चीनबाट बढ्दो खतराको बीचमा ताइवानको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जुलुस गर्नका लागि आह्वान बढाए।
अमेरिकी सरकार भित्र र बाहिर धेरै चिनियाँ पर्यवेक्षकहरू विश्वास गर्छन् कि बेइजिङले संयुक्त अभ्यास जस्ता कदमहरूमा अत्यधिक प्रतिक्रिया दिएर, हामीलाई वास्तवमा केहि गर्न दबाब दिन खोजिरहेको छ किनकि उसले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेको छ। बेइजिङको पक्षमा उभिँदा अनिवार्य रूपमा द्वन्द्व निम्त्याउने छ भन्ने विश्वास गर्ने पश्चिममा केही मानिसहरूलाई चीनले डरलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छ।
Previous articleबलुचिस्तानमा आन्दोलनकारीलाई रकम वितरण गरिएको मुख्यमन्त्रीको भिडियो सार्वजनिक
Next articleचुनावको पहिलो चरणमा इमरान खानको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरिन्दै